Azonao atao ve ny mampiseho amiko fomba mety ahafahana mamorona brochure miaraka amin'ny tranokalan'ny EDU?
Tsy ilaina ny milaza fa na dia iray monja amin'ny backlink amin'ny tranokalan'ny EDU aza dia mety ho sarobidy kokoa ho an'ny tranokalanao na blôginao, fa tsy karazan'olona mahazatra miaraka amin'ny isa avo lenta. Mampalahelo fa ny fifandraisana amin'ny loharanom-pampianarana dia tsy mora araka ny eritreritrao. Saingy manana fomba amam-panao maromaro aho mba hamitana ny asa - amin'ny famokarana votoatin'ny fanabeazana mendrika mba hahazoana io loharano mendrika io avy amin'ny dot EDU domain. Ary etsy ambany aho dia hamerina hijery ity dingana ity.
Famokarana Content Fanabeazana Tsara
Azonao atao ny mividy tranonkala amin'ny tranokalan'ny EDU - mampifandray tsara ny fifandraisana, ohatra amin'ny anjerimanontolo na oniversite, Manolotra azy ireo votoaty tsara ho azy ireo. Mariho anefa fa izany dia ho asa mandany fotoana ho an'ny tenanao manokana - yacht experts miami. Izany no antony tokony hijerena tsara raha toa ka azonao atao ny manoratra ny votoatin'ny fanabeazana avo lenta, na mametraka ny tetikasa amin'ny mpanoratra matihanina - na manosotra azy amin'ny mpihaino mafàna fo na mieritreritra ny hividy mpizara tranonkala matihanina.
Mazava ho azy fa misy fomba hafa azo atao izay mety haka fotoana kely. Na dia izany aza, ny ankamaroan'izy ireo dia mora mora ny mandika azy amin'ny spam, raha tsy vita tanteraka. Noho izany, mino aho fa aleo miezaka bebe kokoa amin'ny alàlan'ny tranonkala EDU miaraka amin'ny votoaty tsara.
Mifantoha amin'ny fananganana lahatsoratra avo lenta sy tokana izay mety hanintona ny mpihaino marobe - amin'ity indray mitoraka ity dia mety ho sahirana amin'ny mpianatra mpianatra, mpampianatra na mpiasa ianao mpikambana miandraikitra. Ataovy izany, tadidio fa tokony hanome votoaty manam-pahaizana manokana izay azo ampiasaina amin'ny tanjona fampianarana ianao - izay mitaky anao hanao fikarohana lalindalina kokoa na farafaharatsiny ho an'ireo traikefa sarobidy eo amin'ny fiainana.
Fotoana izao hialana amin'ny raharaham-barotra ary hanomboka ny fitoriana. Misy fomba maromaro azo ampiharina amin'ny fifandraisana tsara amin'ny olona tsara. Toy izao ny fomba azonao entina hanampiana azy ireo hametraka ny votoatiny matihanina ary hiverina amin'ny tranokalanao na blôginao:
Voalohany indrindra, manoro hevitra aho amin'ny famolavolana tetikasa iray izay mahasoa, ohatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite na mpampianatra eny amin'ny oniversite. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mamantatra ny lohahevitra izay tena mahaliana sy manan-danja ho azy rehetra - ireo mpampianatra sy ireo foibe eo an-toerana. Amin'izany fomba izany, raha toa ka efa miezaka mialoha ny zavatra rehetra dia afaka manomboka manoratra loharanom-pampianarana iray izay havoaka ao amin'ny tranokalan'ny tranonkala nankatoavina.
Manaraka, manandrana mamorona fiaraha-mientana fiantrana - tena tsara, misy ny oniversite maro be vonona sy vonona ny handefa hafatra ho an'ireo mpanohana azy. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hanolotra fifanekem-piaraha-miasa iray - ahazoana antoka fa ny votoatinao dia mitodika amin'ny olana mety, toy ny fiaraha-miasa misy anao, na ireo fifanakalozan-kevitra hafa ao amin'ny oniversite izay mila fijerena betsaka.
Community Blogging Community
Mety hifandray amin'ireo mpitoraka blaogy ambony ao amin'ny oniversite ianao - ary manolora fotsiny ny hanomezana hafatra amin'ny blaoginy ao amin'ny pejiny fampianarana mba hahazoana alalana avy amin'ny dot EDU domain. Eritrereto hoe ahoana no ahafahanao mampifalifaly azy ireo amin'ny votoatiny - mandanjalanja momba ny fahaiza-manaon'ny profesora, toro-hevitra momba ny asa, ny fifandraisana amin'ny ety ambony na ny tantara mahomby, sns.
Tohizo hatrany ny lalam-baovao farany amin'ny tranokalan'ny EDU rehefa mandeha velona izy. Amin'izany fotoana izany, manoro ahy ny "pinging" loharanon'ireo rohy vaovao noforonina mampiasa pingmyurl. com na ireo fitaovana hafa an-tserasera hafa. Raha manao izany ianao, dia hiantso fikarohana mikaroka ianao mba hahatonga ny rindran-kira vaovao ho haingana kokoa, hany ka mihambo ho fampiroboroboana ny lozam-pivoarana.